टुकुचाको एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता
काठमाडौं । १.बूढानीलकण्ठबाट लाजिम्पाट हुँदै आएको खोला उत्तरढोका र गैरीधाराको बीचबाट नारायणहिटीभित्र छिर्छ । २. नारायणहिटीभित्र पनि खोला साँघुरो छ, तर बगेको स्पष्ट देखिन्छ, जयनेपाल हलअगाडिको पर्खालसम्म खोला छ । ३. जयनेपाल हलबाट दक्षिणतर्फ कमलादी मोडसम्म खोलाको नामोनिसान छैन, खोला भूमिगत बनाएर भव्य भवन बनेका छन्
टुकुचा खोलाको जग्गा मिचिएको सूचना प्राप्त भएको छ । यसको विस्तृत विवरण पठाउन वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ । यस्ता जग्गा मिचिएको यो नै पहिलो होइन । अन्य ठाउँमा पनि छन् । सबै वडालाई मिचिएको जग्गाको पूर्ण विवरण पठाउन भनेका छौँ । विवरण संकलन हुँदै छ । कतिपय आई पनि सकेका छन् । मिचिएका जग्गा फिर्ता सम्बन्धमा विशेष प्रस्ताव तयार हुँदै छ । यो प्रस्ताव कार्यपालिकामा पेस हुन्छ । निर्णयपछि कडाइका साथ मिचिएका जग्गा फिर्ता अभियान सञ्चालन हुन्छ । टेकराज थामी, नयाँ पत्रिकाबाट